မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်စကားတွေအများကြီး ပြန်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ D.O.
EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ကို 1993 ခုနှစ် January လ 12 ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆို D.O. ဟာ အသက် 30 ပြည့်ပါပြီ။ D.O. ဟာ ငယ်ငယ်ထဲက အဆိုတော်မင်းသားကြီး ဖြစ်ချင်တဲ့သူပါ။ ဒါမှမဟုတ် စားဖိုမှူးအဖြစ် အသက်မွေးဖို့စဉ်းစားထားတဲ့သူပါ။ ခုတော့ သူ့အိပ်မက်တွေအတိုင်း Korea နိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ Kpop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခဲ့သလို သရုပ်ဆောင်လိုင်းမှာလည်း နာမည်ရ ခေါင်းဆောင် မင်းသားတလက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ရီလိုက်ရင် အသည်းပုံအပြုံးပိုင်ရှင်လေးဖြစ်တဲ့ D.O. ဟာ EXO အဖွဲ့ထဲမှာ အတည်ငြိမ်ဆုံးနဲ့ ရိုးရိုးအေးအေး နေထိုင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ လူရိုးကြီးဆိုပေမဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ D.O. ကို Kpop ပရိတ်သတ် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ က သည်းသည်းလှုပ်သလို K-Drama fan အာဂျီးမားတွေကလည်း သူတို့လိုချင်တဲ့ သမက်ပုံစံလေးဖြစ်တာမို့ D.O. ကို ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် D.O. မှာ fan boy တွေလည်းရှိပါတယ်။
အားလုံးရဲ့အချစ်တော် D.O. လေးရဲ့ မွေးနေ့ဟာ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာအနှံ့က ပရိတ်တွေရော အကုန်လုံးလိုလိုက ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ D.O (fanclub) ဆိုရင် D.O. မွေးနေ့အတွက် ရည်စူးပြီး Korean ကလေးကင်ဆာလူနာ ဖောင်ဒေးရှင်းကို ဝမ်ပေါင်း 20 million လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ တခြား fan club တွေကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ D.O. အတွက်နေရာပေါင်းစုံမှာ အလှူလုပ်တဲ့သူလုပ်က လုပ်၊ ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပတဲ့သူက ကျင်းပနဲ့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါတွေကို သိတဲ့ D.O. ဟာ bubble chat မှာရော lysn app မှာရော ကျေးဇူးတင်စကား ခုလို ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော့်မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ အကုန်လုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်နေပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာကျရောက်မဲ့ မွေးနေ့ပိုင်ရှင်တွေလည်း happy Birthday ပါ။ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးဆုံးမို့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် ပြန်မဆုံမချင်း ကျန်းမာအောင်နေကြပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကို ဆက်လက်ပြီး အားပေးကြပါအုံး​
ဒါ့အပြင် သူ့ကိုယ်သူ ဆုတောင်းချင်တဲ့ Birthday wish က တော့ ကျန်းမာပါစေ Kyung Soo ပါတဲ့။ မွေးနေ့မှာ အရသာရှိတာတွေစားပြီး ခရီးသွားချင်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ D.O. အဖြစ်ချင်ဆုံးက သူကိုယ်တိုင်ရော သူ့မိသားစုအပါအဝင် ချစ်ခင်ရသူတွေ အားလုံး မဖျားနာဘဲ ကျန်းကျန်းမာမာရှိစေချင်တာပါတဲ့။ D.O. ရဲ့ ဆုတောင်းလေးတွေ ပြည့်ပါစေလို့ Asia Cele Bar page မှလည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Photo Credit: Lysn
Previous post မြန်မာပရိသတ်​တွေအတွက် စိတ်ပူ​ပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လာလည်ချင်​ကြောင်း ​ပြောကြားခဲ့တဲ့ WINNER အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Nam Tae Hyun
Next post ၂၀၂၂ မှာ စီးကြိုနေတဲ့ ထိုင်းထိပ်တန်းမင်းသမီး (၃) ဦးရဲ့ ဇာတ်ကားသစ်များ